Fivavahana abrahamika - Wikipedia
Ny fivavahana abrahamika na finoana abrahamika dia ireo fivavahana heverina fa nandova tamin' i Abrahama ny finoana Andriamanitra tokana, ka ny tena fantatra amin' izany dia ny jodaisma sy ny kristianisma ary ny silamo, izay manorina izany finoany izany amin' ny boky heveriny ho Soratra Masina, dia ny Tanakh sy ny Baiboly ary ny Kor'any.
Famantaran'ny finoana abrahamika: ny kintan'i Dvida ho an'ny Jodaisma, ny vokovoko ho an'ny Kristianisma, ny Anaran'Andriamanitra (Allah) ho an'ny Silamo.
Isan' ny fivavahana abrahamika koa ny iazdanisma, ny samaritanisma, ny fivavahan' ny Droza, ny babisma, ny finoana bahay, ny rastafarisma, ny mandeisma, ny sabakisma, ny iazdanisma ary ny iazidisma.
1.1 Ny fivavahana abrahamika lehibe
1.1.1 Ny jodaisma
1.1.2 Ny kristianisma
1.1.3 Ny finoana silamo
1.2 Ny fivavahana abrahamika madinika
1.2.1 Ny samaritanisma
1.2.2 Ny finoana bahay
1.2.3 Ny babisma
1.2.4 Ny iazdanisma
1.2.5 Ny fivavahan' ny Droza
1.2.6 Ny rastafarisma
1.2.7 Ny mandeisma
1.2.8 Ny iazidisma
1.2.9 Ny sabakisma
2 Ny singa ifanahafan' ny fivavahana abrahamika
2.1 Ny mônôteisma
2.2 Ny fananana soratra masina
2.3 Ny fitsipi-pitodran-tena
2.4 Ny fomba fijery ny hiafaran' ny zavatra rehetra
2.5 Ny maha zava-dehibe an' i Jerosalema
2.6 Ny lanjan' i Abrahama
3 Isan' ny mpino
Ireo fivavahana abrahamikaHanova
Ny fivavahana abrahamika lehibeHanova
Ny jodaisma dia endriky ny fivavahan' ny Israelita taorian' ny faharavan' ny Tempolin' i Jerosalema (taona 587 tal. J.K.) sy taorian' ny fahababoan' ny Jiosy avy tany Babilôina (587 - 538 tal. J.K.). Jiosy no fiantsoana ny mpino ao amin' io fivavahana io. Dimy ambin' ny folo tapitrisa no isan' ny Jiosy manerana izao tontolo izao ary fito tapitrisa amin' ireo no mipetraka any Israely. Ny Tanakh no Soratra Masin' ny jodaisma izay mirakitra ny Lalàna voasoratra (Torah) nambaran' Andriamanitra tamin' i Mosesy amin' ny ankamaroany teo amin' ny tendrombohitra Sinay (na Sinaia). Araka ny Baiboly dia i Abrahama razamben' ny Hebreo no rain' ny fivavahana jiosy. Ny fahababoana tany Babilôna izay nanomboka tamin' ny taona 586 tal. J.K. dia nitondra fiovana lehibe teo amin' ny fivavahan' ny jiosy. Tany Babilôna no namitana ny fanoratana ny ankamaroan' ny bokim-pivavanan' ny jiosy izay nanao fivoasana ny tantaran' ny Zanak' i Israely tamin' ny fampifandraisana izany amin' ny faharavan' i Jerosalema sy ny Tempoly.
Ny kristianisma dia mino Andriamanitra tokana, izay mifototra amin' ny soratra navelan' ny apôstôly (evanjely na filazantsara) mikasika ny fiainan' i Jesoa avy any Nazareta, na Jesoa Kristy. Miisa eo amin' ny 2 000 000 000 eo ho eo ny mpino, miparitaka anaty antokom-pangonana 33 000. Ny Testamenta Taloha – ny Baiboly hebreo – miaraka amin' ny Testamenta Vaovao no soratra ifotoran' ny finoana kristianina. Amin' ny Kristiana dia i Jesoa no Mesia na Kristy. Inoan' ny Kristiana ho voahosotr' Andriamanitra sy nirahina ho ety ambonin' ny tany hanavotra ny olombelona amin' ny alalan' ny fahafatesany sy ny fitsanganany ho velona i Jesoa.
Ny finoana silamo dia mifototra amin' ny finoana an' Andriamanitra tokana (Allah) sy amin' ny Kor'any izay heverin' ny mpino silamo fa boky nandraiketana ny tenin' Andriamanitra ara-bakiteny. Ny Kor'any dia nambara tamin' i Mohamady izay fantatry ny silamo ho mpaminanin' Andriamanitra tany Arabia tamin' ny taonjato fahafito. Tsy azo aseho an-tsary Andriamanitra satria tsy mifangaro fa ivelan' ny zavatra noforoniny sady avo indrindra.
Ny fivavahana abrahamika madinikaHanova
Fivavahana mifanakaiky amin' ny fivavahana jiosy ny samaritanisma, nefa ny boky dimy voalohany ao amin' ny Baiboly ihany (atao hoe Pentateoka) no ekeny ho Soratra Masina. Amin' izao fotoana izao dia misy ny Samaritana israeliana sy ny Samaritana jordaniana ary ny Samaritana palestiniana. Vitsy izy ireo satria tamin' ny taona 2007 dia 796 no isany. Ny Torah samaritana no soratra masin' ny fivavahana samaritana izay tsy ahitana boky hafa afa-tsy ny Lalàna (Torah). Misy fahasamihafana ny votoatin' ny Torah hebreo amin' ny Torah samaritana. Ny lehibe indrindra amin’ ireo dia ny fiheverany fa tsy i Jerosalema fa ny tendrombohitra Garizima no toerana masina. Ny Didy folo ao amin’ ny Torah samaritana dia ahitana ao amin’ ny didy faha-10 ny fanajana an’ i Garizima ho ivon-toeran’ ny fanompoam-pivavahana.
Ny finoana bahayHanova
Ny bahaisma na finoana bahay dia finoana nentin' i Baha'u'llah. Fivavahana mitory ny maha iray ara-panahy ny olombelona rehetra ny finoana bahay. Tamin' ny taona 2011 dia niisa 7 000 000 any ho any ny mpino bahay. Ny ivotoerana dia ao Haifa sy ao Acra any Israely. Ilay atao hoe fanambaràna (wahī) ara-pivavahana miandalana, amin' ny Bahay, dia mahatonga azy ireo hanaiky ny maha tena izy ny ankamaroan' ny fivavahana manerana izao tontolo izao, ka ny mpanorina azy na ny olona manan-danja indrindra tao amin' ireo fivavahana ireo dia heveriny ho "fisehoan' Andriamanitra". Isan' ireo "fisehoana" ireo ohatra i Mosesy (na Môizy), i Jesoa, i Mohamady, i Krishna, i Zaratostra (na Zôrôastra) ary i Boda. Ny paradisa sy ny fiainan-tsy hita dia toetra ara-panahy izay manakaiky na manalavitra an' Andriamanitra ka anambaràna ny fifandraisana eto amin' ity tontolo ity sy ilay tontolo hafa, fa tsy toeram-pamalian-tsoa na fanasaziana aorian' ny fahafatesana.
Ny babisma dia fihetseketsehana ara-pivavahana mpitondra fanitsiana sy milenarista naorin' ny mpivarotra iray atao hoe Sayyid ʿAlī Muḥammad Šīrāzī (1819-1850), izay nomena ny anaram-petaka hoe Bāb (teny arabo باب midika hoe "varavarana"). Firehana ara-pivavahana nipoitra avy amin' ny sampana shiitan' ny finoana silamo ny babisma. Amin' ny fanambaran' ny Bāb dia fisehoan' Andriamanitra avokoa ny mpaminany rehetra. Tsy misy afa-tsy mpianatra vitsivitsy ankehitriny sisa amin' ny mpianatr' i Bāb. Ao Iràna sy ao Ozbekistàna no tena ahitana azy ireo nefa sarotra ny mahalala ny tena isany.
Ny iazdanisma dia fivavahana mônôteista taloha izay mivavaka amin' ny anjely (iazdâny), izay nataon' ny Korda talohan' ny niitaran' ny tany fehezin' ny Arabo tamin' ny taonjato faha-7 sy ny fanovana azy ireo ho amin' ny finoana silamo. Ny iazdanisma dia mino ny fahaterahan' ny zavamananaina indray miaraka amin' ny fanahin' ny zavamananaina hafa efa maty taloha, sahala amin' ny hindoisma, ary misy anjely fito izay inoany fa miaro an' izao tontolo izao amin' ny devoly na demony fito.
Ny fivavahan' ny DrozaHanova
Ny fivavahan' ny Droza dia fivavahana miozolmàna tsy manaraka izay arahin' ny maro. Ao amin' ny tapany atsimon' i Libàna sy ao amin' ny faritra afovoan' ny Tendrombohitra Libàna, ao amin' ny tapany atsimon' i Siria, ao amin' ny faritra avaratry ny Fanjakan' i Israely ao Galilea, ary eo amin' ny havoan' i Golàna no fonenan' izy reo. Miafina ny fivoasany ny boky Kor'any sady tsy ambarany ny mpino izany raha tsy aorian' ny dingam-pisedrana maro. Mino ny fifindran' ny fanahin' ny maty amin' ny zavamananaina hafa ny Droza. Ireo mpino te hanokana ny fiainany amin' io fivavahana io ihany no manan-jo hamaky ny boky masin' izy ireo atao hoe Kitab al hekma ("bokin' ny fahalalana").
Ny rastafarisma dia hetsika mesianika nandroso ao Jamaika tamin' ny taona 1930, izay miseho amin' ny lafiny mozika amin' ny alalan' ny ngadona reggae. Tamin' ny taonjato faha-20 dia fanta-bahoaka maneran-tany io fihetsiketsehana io tamin' ny alalan' ny fahombiazan' i Bob Marley.
Ny mandeisma dia fivavahana manao batisa sy gnôstika. Fototry ny fampianaran' ny mandeisma ny fifanoheram-poto-javatra roa (doalisma) izay ahitana ny "toeran' ny fahazavana" sy ny "toeran' ny haizina", izay tsy misakana an' Andriamanitra hiditra an-tsehatra amin' ny famoronana. Izany famoronana izany dia tohizan' ny asa maharitra ataon' Andriamanitra sy ny fanambaràna amin' ny alalan' ny "Iraky ny lanitra". Araka ny lovantsofina mandeana dia i Joany mpanao batisa izany iraka izany sady mpaminany lehibe ho an' izy ireo. Talohan' ny taona 2003 sy talohan' ny fipoahan' ny ady tao Iràka dia nonina tao Iràka ny ankamaroan' ny Mandeana izay niisa 65 000 any ho any, Ny ankamaroan' izy ireo hatramin' izay dia niparitaka, indrindra mankany Iràna, ary koa any Siria, any Jordania ary any amin' ireo firenena tandrefana.
Ny iazidisma dia fivavahan' ny fianakaviambe ara-pivavahana iezidy, izay lazain' ireo mpino ao aminy ho nipoitra avy ao Iràna taloha. Ny mpino iazidy dia fianakaviambe ara-pivavahana ao amin' ireo Korda. Maro ny fifanahafana hita eo amin' ny iazidisma ankehitriny sy ireo fivavahana iraniana taloha. Ny fikarohana eorôpeana sy miozolmana dia mihevitra ny iazidisma ho fihetsihetsehana tsy nanaraka ny fampianarana ôfisialin' ny silamo sonita.
Ny sabakisma dia ny finoana sy ny fanao ara-pivavahan' ny Sabaky ao amin' ny tany iadiana ao avaratr' i Iràka. Ny ankamaroan' ny Sabaky dia mihevitra ny tenany ho Miozolmana siita. Na dia izany aza dia tsy sahala amin' ny silamo ny finoany sy ny fombafombany. Na eo aza izany dia manao fivahiniana masina any amin' ny tanàna masina siita toa an' i Najaf sy i Karbala izy ireo sady manaraka fampianarana maro avy amin' ny silamo siita. Araka ny Sabaky, ny fisian' Andriamanitra tokoa dia misolo ny fivoasana ara-bakitenin' ny Kor'any, dia ny Sar'ia izany. Mino ny fisian' ny mpanelanelana sahala amin' ny iarsanisma ny sabakisma.
Ny singa ifanahafan' ny fivavahana abrahamikaHanova
Ny fivavahana abrahamika dia nandova tamin'i Abrahama ny finoana Andriamanitra tokana, Andriamanitra dia ilay fisiana ambony indrindra, tokana, mpamorona ny zavatra rehetra ary loharanon' ny zavatra misy rehetra. Tonga lafatra izy, tsy manam-petra, tsy miova, mandrakizay, tsara indrindra, mahalala ny zava-drehetra ary mahefa ny zava-drehetra ary andriamanitra misahana izao rehetra izao. Mpamonjy ny olombelona sy ny zavaboary rehetra, ary nanambara tena nandritra ny Tantara izy. Vokatry ny sitrapon' Andriamanitra no nampisy an' izao tontolo izao tamin' ny namoronany azy, ka noho izany dia Andrimanitra no tompon' izao rehetra izao. Tsy mifangaro amin' ny zavaboary Andriamanitra fa ivelany sady amboniny ary tsy takatry ny saina, izany hoe mihoa-draha.
Ny fananana soratra masinaHanova
Ny fivavahana abrahamika tsirairay dia samy miorina amin' ny soratra masina izay inoan' ny mpino fa vokatry ny fanambaràn' Andriamainitra sady mitana anjara toerana lehibe. Ny fanambaràna dia fahalalana azo mivantana amin' Andriamanitra ka mety ho amin' ny alalan' ny fisehoan' Andriamanitra izany na ny fahenoana ny teny mivoaka avy ao aminy na ny tsindrimandry azon' ny mpaminany na ny fanomezany lahateny efa voasoratra rahateo avy any aminy na fisehoan-javatra tsy fahita eo amin' ny zavaboary.
Manana fitsipi-pitondran-tena ny fivavahana abrahamika rehetra, ka ny lehibe amin'izany dia ny fisafidianana ny tsara fa tsy ny ratsy, ny fanajana an' Andriamanitra tokana sy ny lalàny.
Ny fomba fijery ny hiafaran' ny zavatra rehetraHanova
Manana ny fomba fijeriny ny tantara sy ny hiafaran' ny zava-drehetra (eskatôlôjia) ny fivavahana abrahamika: nanomboka tamin' ny famoronana an' izao tontolo izao izany, ny fiasàn' Andriamanitra ao anatin' ny tantara, ny fiafarana izay hahitana ny fitsanganana amin'ny maty, ny fitsarana farany. ary ny hahatongavan'ny tontolo vaovao. Ny ankamaroan' ireo fivavahana monoteista dia misy foto-pampianarana milaza fa ny mpivavaka voafidy na mendrika ny finoana marina dia hovonjena na hafahana amin'ny fitsaran' Andriamanitra sy ny fahatezerany amin'ny ho avy. Ho any am-paradisa izy ireo aloha na mandritra na aorian'io fitsarana io arakaraka ny fampianarana.
Ny maha zava-dehibe an' i JerosalemaHanova
Tanàna masina i Jerosalema amin'ny Jiosy sy ny Kristiana sy ny Silamo ary ny fivavahana abrahamika maro hafa.
Azon'i Davida i Jerosalema tamin'ny taona 1000 tal. J.K. ka nataony renivohitry ny fanjakany sy ny fivavahan'ny Israelita. Vitan'i Solomona ny Tempoly teo anelanelan'ny taona 969 sy 962 tal. J.K. Tamin'ny taona 587 tal. J.K dia noravan'i Nebokadnezara mpanjakan'i Babilona i Jerosalema mbamin'ny Tempoly sady natao sesitany tany Babilona ny mponina tao. Taty aoriana dia nahazo alalana hiverina any Jerosalema ny Jiosy babo. Rehefa notafihin'i Aleksandra Lehibe i Palestina ka azony dia ny Lagida sy ny Seleokida no nifandimby nanapaka. Nikomy ny Makabeo tamin'ny taona 143 tal. J.K. ka nahazo fahaleovan-tena indray ny Jiosy ary lasa renivohitry ny fanjakana jiosy indray i Jerosalema. Tamin'ny andron'ny Empira kristiana dia lasa ivontoeran'ny fivahiniana masina i Israely, indrindra fa i Jerosalema. Ankehitriny dia misy môske miorina ny toerana nisy ny Tempoly jiosy taloha.
Ny lanjan' i AbrahamaHanova
I Abrahama dia ilay lehilahy heverina fa nipoiran' ireo fivavahana telo mino Andriamanitra tokana. Araka ny Baiboly, noho ny haben'ny finoany no nilazan' Andriamanitra aminy fa izy dia hanan-taranaka maro sady nampanantenainy tany mahavokatra ho an'ireo taranany ireo. Samy miresaka ny momba azy na ny Baiboly na ny Kor'any na ny boky masina hafan' ireo fivavahana abrahamika.
Isan' ny mpinoHanova
Ny kristianisma no fivavahana lehibe indrindra amin' ireo fivavahana abrahamika, izay misy mpino misa 2,3 lavitrisa eo ho eo, izany hoe 31,1 % eo ho eo amin' ny mponina eran-tany.
Ny finoana silamo no fivavahana abrahamika faharoa lehibe indrindra, ary koa ny fivavahana abrahamika mitombo haingana indrindra. Manana mpanaraka miisa 1,9 lavitrisa eo ho eo izy io, antsoina hoe Silamo na Miozolmana, izay mahaforona eo amin' ny 24,1 %n' ny mponina eran-tany.
Ny fivavahana abrahamika fahatelo lehibe indrindra dia ny jodaisma izay misy mpanaraka miisa 14,1 tapitrisa eo ho eo, antsoina hoe Jiosy.
Manana mpanaraka miisa 7 tapitrisa eo ho eo ny finoana bahay, ka izy no fivavahana abrahamika fahefatra lehibe indrindra.
Ny finoan' ny Droza dia manana mpanaraka eo anelanelan' ny iray tapitrisa sy efa ho roa tapitrisa.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fivavahana_abrahamika&oldid=1043654"
Dernière modification le 8 Febroary 2022, à 13:17
Voaova farany tamin'ny 8 Febroary 2022 amin'ny 13:17 ity pejy ity.